बाँदरहरू युवा हुँदैनन् - Parichaya.com
बाँदरहरू युवा हुँदैनन्
By परिचय	 On ९ श्रावण २०७८, शनिबार १२:५२ 0
भारी जनादेश पाएका निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सर्वोच्च अदालतको परमादेशले पाखा लाएपछि रिसले आगो भएका ओली निकट युवा सङ्घले बाँदरे जुलुश निकाले । राजनीतिक रङ्गमञ्चमा रमाइलो ठट्टा र किस्साहरू जन्मिए । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका २२ सांसदले व्यक्ति शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएपछि युवा सङ्घका सदस्य चुर भए । मत दिने सांसदलाई बाँदरको दर्जामा राख्दै बाँदरको मुकुण्डो लगाएर सडक प्रदर्शनमा देखिए । सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालका लागि मनोरञ्जनको ‘मसला’ बन्यो । सङ्घका युवाले चरम आक्रोश पोख्दै सर्वोच्च अदालत, नवनिर्मित सरकार र आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेताको हुर्मत लिदैं चर्को आवाजमा नारा जुलुश प्रदर्शन गरे । बाँदरे मुखुण्डो लगाएर प्रतीकात्मक सन्देश दिए । साङ्केतिक रूपमा दाहसंस्कार र पुत्ला दहन पनि सम्पन्न गरे । बाँदरे बिम्व नेपाली राजनीतिमा स्थापित भयो ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा विरोध प्रदर्शनका लागि ठाउँ हुन्छ । विमती राख्ने समय हुन्छ । त्यसैले लोकतन्त्रको सौन्दर्य दर्शाउँछ । विरोध प्रदर्शनको शैली र स्वरूपमा विगत ३० वर्षदेखि अनेकौं परिवर्तनहरू देखिएका छन् । हिजो सडकका रेडिङ फाल्ने, सडकमा टायर बाल्ने, सडकमा विद्रोहको झण्डा बोक्ने यावत् काम भए । चक्काजाम र हड्ताल हुँदै नेपाल बन्दसम्मका हर्कतहरू सत्ताका विरुद्धमा भए । पाखुरीमा जोश जाँगर भएका युवालाई सिर्जनशील काममा खटाएर, क्रियाशील जीवन विताउन सिकाउनुको सट्टा आफ्नो भक्ति र शक्तिमा रूपान्तरण गर्नु समयको वर्वादी हो । जनवादी युवा संस्कृतिको भ्रष्टीकरण र साँस्कृतिक विचलनको विदू्रप अवस्था हो । सत्ताबाट पत्तासाप भएका नेताका जुत्ताको तलुवा सरह भएका युवाले किन हुनुमान भक्ति देखाए र किन बाँदर बन्ने काम गरे यसको अन्तर्य गम्भीर छ । कुनै समय अरिङ्गाल बने, साइबर सेना बने त्यसले केवल गलत सन्देश दियो ।
मानव सभ्यताको विकासक्रमलाई सिंहावलोकन गर्ने हो भने मान्छेका पूर्वज बाँदर नै हुन् । हिजो चार खुट्टाले टेक्ने बाँदरहरू दुई खुट्टामा टेक्ने दुस्साह गरेकै कारण मानवको विकास भएको विज्ञानले जनाएको छ । तर आजका बाँदरहरू दुई खुट्टामा अडिने प्रयास र पहल गर्दैमा मान्छेमा किमार्थ रूपान्तरण हुँदैनन् ।
युवाले उच्चारण गर्ने शब्दहरू राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत हुनु पर्ने हो । युवा सङ्घ, युथ फोर्स, वाइसिएल, लगायतका शक्तिले जुन नाम राखे पनि त्यसको गरिमा कायम गर्न सकेका छैनन् । बाहुबलका लागि पेशेवर अपराधी, गुण्डा, ठेकेदार र विचौलियालाई रातो कार्पेट विछ्याएर स्वागत गर्नु आफ्नै अनुहार नहुनु हो । यसले सुशासनमा बाधा पारी अपराधीकरण बढाएको छ भने युवाको मतिलाई चरम भ्रष्टीकरण पनि गरेको छ । ओलीले आफ्ना नौजवानलाई बाँदर बनाउनु भावी पुस्ताका लागि ऐतिहासिक किस्सा बन्ने छ । मानव सभ्यताको विकासक्रमलाई सिंहावलोकन गर्ने हो भने मान्छेका पूर्वज बाँदर नै हुन् । हिजो चार खुट्टाले टेक्ने बाँदरहरू दुई खुट्टामा टेक्ने दुस्साह गरेकै कारण मानवको विकास भएको विज्ञानले जनाएको छ । तर आजका बाँदरहरू दुई खुट्टामा अडिने प्रयास र पहल गर्दैमा मान्छेमा किमार्थ रूपान्तरण हुँदैनन् ।
कम्युनिस्ट स्कुलमा एउटा गज्जवको कहावत छ । मत मिल्दासम्म ‘मेरो कामरेड’ भनेर गला जोड्ने र मतभेद हुनसाथ ‘लालगद्धार’ भनेर गला नै रेट्ने । बाम आन्दोलनमा गद्धार सनातन शब्द नै हो । बालुवाटारबाट बालकोट फिर्ती भएका ओलीले आफ्नै बरण्डाबाट माधव नेपाललाई गद्धार घोषित गरिदिए । राजनीतिमा मतमतान्तर जरुर हुन्छ, पार्टीभित्र फरक विचार र धार हुन्छ वैचारिक सङ्घर्ष र अडान हुन्छन् र नोट अफ डिसेन्ट जारी हुुन्छ । वि.सं. २०५४ सालमा पार्टी फुट्दा टुडिँखेलबाट बामदेव गौतमलाई भ्रष्टाचारीको तक्मा शब्द मार्फत् दिइएको थियो । त्यसबेला पनि पार्टीका नेतामा गम्भीर घृणा जागृत भएको थियो । गौतमको कावासोतीमा आयोतिज सभालाई एमालेले टिन ठटाएर हैरानी सिर्जना गरेको धेरै भएको छैन् ।
घृणाको राजनीतिले मुलुकमा सद्भाव र समृद्धि प्राप्त हुँदैन् । कम्युनिस्ट स्कुलमा एउटा गज्जवको कहावत छ । मत मिल्दासम्म ‘मेरो कामरेड’ भनेर गला जोड्ने र मतभेद हुनसाथ ‘लालगद्धार’ भनेर गला नै रेट्ने । बाम आन्दोलनमा गद्धार सनातन शब्द नै हो । बालुवाटारबाट बालकोट फिर्ती भएका ओलीले आफ्नै बरण्डाबाट माधव नेपाललाई गद्धार घोषित गरिदिए । राजनीतिमा मतमतान्तर जरुर हुन्छ, पार्टीभित्र फरक विचार र धार हुन्छ वैचारिक सङ्घर्ष र अडान हुन्छन् र नोट अफ डिसेन्ट जारी हुुन्छ । वि.सं. २०५४ सालमा पार्टी फुट्दा टुडिँखेलबाट बामदेव गौतमलाई भ्रष्टाचारीको तक्मा शब्द मार्फत् दिइएको थियो । त्यसबेला पनि पार्टीका नेतामा गम्भीर घृणा जागृत भएको थियो । गौतमको कावासोतीमा आयोतिज सभालाई एमालेले टिन ठटाएर हैरानी सिर्जना गरेको धेरै भएको छैन् । शेरबहादुर देउवालाई नेपाली काँग्रेस पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारवाही गर्दा पनि काँग्रेसजनले तल्लो स्तरको शब्द प्रयोग गरेनन् । आरोप प्रत्यारोपमा हिलो छ्याप्ने र चरित्र हत्या गर्ने काम गरेनन् ।
राजनीतिक दल आफैमा शक्ति हो । शक्ति प्रदर्शनका लागि सेना र दस्ता चाहिँदैन् । बाहुबलमा राजनीति टिक्यो भने त्यसले अतिवाद स्थापना गर्छ । पाखुरे शक्तिको धङ्धङ्गीबाट राजनेता मुक्त हुनै पर्छ । माओवादीले वाइसिएल गठन गरेपछि यसको नामले नै सास्ती दियो । एमालेले सिको गर्दै युर्थ फोर्समा भर्ती खुलायो । पाखुरेहरूको यसमा हावी रह्यो । बहुलवादी समाजमा बाहुबलवालाको वर्चस्व कायम हँुदै गयो । प्रतिगगनलाई घुँडा टेकाउन चाहने शक्तिका विरुद्ध परिचालित युवाले बाँदरे जुलुश निकालेको नेतृत्वले नै स्वीकार गरेको छ । समाजलाई धम्की र ध्वाँसका भरमा चलाउनु गलत मानसिकता त हुँदै हो फाँसीवादी चिन्तनको उपज पनि हो ।
पञ्चयात पतन गराउन नेविसंघ, अनेरास्ववियु, तरूण दल, युवा संघले खेलेको भूमिका ऐतिहासिक थियो । २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन नै यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । २०४६ सालमा पनि विद्यार्थी सडकमा आए, लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा नेताभन्दा पहिला विद्यार्थी जुटेका थिए । दलका भातृ सङ्गठन जुर्मुराएपछि मात्रै नेता तातेको तथ्य बिर्सन मिल्दैन् । राजनीतिक दल आफैमा शक्ति हो । शक्ति प्रदर्शनका लागि सेना र दस्ता चाहिँदैन् । बाहुबलमा राजनीति टिक्यो भने त्यसले अतिवाद स्थापना गर्छ । पाखुरे शक्तिको धङ्धङ्गीबाट राजनेता मुक्त हुनै पर्छ । माओवादीले वाइसिएल गठन गरेपछि यसको नामले नै सास्ती दियो । एमालेले सिको गर्दै युर्थ फोर्समा भर्ती खुलायो । पाखुरेहरूको यसमा हावी रह्यो । बहुलवादी समाजमा बाहुबलवालाको वर्चस्व कायम हँुदै गयो । प्रतिगगनलाई घुँडा टेकाउन चाहने शक्तिका विरुद्ध परिचालित युवाले बाँदरे जुलुश निकालेको नेतृत्वले नै स्वीकार गरेको छ । समाजलाई धम्की र ध्वाँसका भरमा चलाउनु गलत मानसिकता त हुँदै हो फाँसीवादी चिन्तनको उपज पनि हो । देशको विकास र जनताको सेवाका लागि राजनीतिक दल नै काफी छन् । तथाकथित संघ, सेना, फोर्स, लडाकु, वाहियत विषय हुन् लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा यिनको औचित्य समाप्त भइसकेको हुँदा दलले आतङ्कको अनुभूत गराउने गिरोह र माफियालाई पाल्नु हुँदैन फाल्नु मनासिव हुन्छ । राजनीतिक पार्टीले यस्ता बाहुबली सेना फोर्सलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्छ ।